तिहार | Ratopati
यमपञ्चक शुरुः भोलि काग तिहार access_timeकात्तिक २७, २०७७
काठमाडौँ – कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि शुरु हुने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक अर्थात् तिहार आजदेखि शुरु हुँदैछ । बिहीबार बेलुकी यमदीपदान शुरु गर्नुपर्ने छ । यस वर्ष यमदीपदान आजदेखि शुरु हुने भए पनि काग तिहार कात्तिक २८ गते शुक्रबार परेको नेपाल पञ्चाङ्...
तनहुँमा यस वर्षको तिहारका लागि यस्तो छ सुरक्षा व्यवस्था, देउसीभैलो खेल्न मनाही access_timeकात्तिक २०, २०७७
जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले नेपालीको दोस्रो महान् पर्व दीपावलीमा यस वर्ष देउसीभैलो खेल्न मनाही गरेको छ । कोभिड–१९ लाई मध्यनजर गर्दै यस वर्षको दीपावलीमा देउसीभैलो खेल्न मनाही गरेको हो । दीपावलीको समयमा पूर्णरूपमा देउसीभैलो खेल्न निषेध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधि...
भाइटीकाको दिन नै गोवर्द्धन पूजा, यस्तो छ कारण access_timeकात्तिक १२, २०७६
काठमाडौं । आज भाइटीकाको दिन नै गोवद्र्धन पूजा परेको छ । द्वापरयुगमा भगवान श्रीकृष्णले हत्केलाले गोवद्र्धन पर्वत उचाली गोकुलवासीलाई मुसलधारे वर्षाबाट बचाएको सम्झनामा गोवद्र्धन पर्वतको पूजा गर्ने प्रच लन बसेको बताइन्छ । यो दिन आँगनमा लिपपोत गरी गाईको गोबरको पर्वत...
तिहारलाई ५ अर्बको सामग्री आयात access_timeकात्तिक ११, २०७६
काठमाडौं - पछिल्ला तीन महिनामा तिहार लक्षित ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको सामग्री आयात भएको छ । सो अवधिमा भाइटीकाका लागि चाहिने बदाम, काजु, किसमिस, स्याउ, सुन्तलालगायत वस्तुको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १ अर्ब ३४ ...
महिला सिडिओलाई भाइटीका खल्लो access_timeकात्तिक ११, २०७६
बुटवल । दिदीभाइ तथा दाजुबहिनीबीचको आत्मीयता उजागर गर्ने पर्व तिहार । तिहारको अन्तिम दिन भाइटीकामा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई सप्तरङ्गी टीका लगाइदिएर दीर्घायुको कामना गर्दछन् । भाइटीकामा दाजुभाइलाई विभिन्न कारणले टीका लगाउन जान नपाउने महिलाका लागि सिङ्गो तिहार नै ख...
पटका पड्काउँदा किन रंगीचंगी प्रकाश देखिन्छ ? access_timeकात्तिक १०, २०७६
तिहार आयो । तिहारमा तपाईंले पनि भुइचम्प रकेट जस्ता विभिन्न पट्का पड्काउनु भयो होला । आफुले नपडकाए पनि तपाईंले अरुले पड्काएको त अवश्य देख्नु भयो होला । त्यसरी पट्का पड्किदा विभिन्न रंगीचंगी प्रकाशहरु निस्केको पनि अवश्य देख्नु भयो होला । आखिर त्यसरी पट्का पड्किदा...
यस्तो पो रहेछ मानिस–कुकुरबीचको सम्बन्ध र कुकुरको पुर्खाको नालीबेली... access_timeकात्तिक १०, २०७६
आजभन्दा हज्जारौं वर्ष पहिले यस पृथ्वीमा अति घना जंगलहरु थिए । ती जंगलहरुमा विशालकाय स्तनपायी जनावरहरु विचरण गर्ने गर्थे । त्यति बेला मानिस आजको जस्तो विकसित मानिस थिएन । त्यतिबेलाको मानिस जंगली अवस्थामा थियो । उनीहरु जंगली जनावरहरुको छालाले आफ्नो शरीर ढा...
३० हजार वर्ष पुरानो कुकुर र मान्छेको नाता access_timeकात्तिक १०, २०७६
‘कुत्ते कमिने मै तेरा खुन पिजाउँगा’ धर्मेन्द्रको यो गर्जनले भारतमा तीन वर्षसम्म कुकुर खोरबाट वाहिर निस्केनन रे ! कुकुरसँग जोडिएको एउटा रमाइलो ठट्टा हो यो । यस्ता ठट्टाको लामो फेहरिस्त तपाईं थप्न सक्नुहुन्छ । कुकुरलाई लिएर हाम्रा ठट्टा, गाली, ता...
धार्मिक आँखामा यमराजका दूत, पितृहरुको सन्देशवाहक काग access_timeकात्तिक ९, २०७६
विज्ञानको आँखामा काग एउटा सामान्य जीव हो, यस संसारमा रहेका वीसौं लाख प्राणीका प्रजातिहरुमध्येका एउटा जीव । तर आस्था र विश्वासको आँखाले हेर्दा काग त्योभन्दा पनि परको विशिष्ट जीव हो । हिन्दू धर्मको हिसाबले भन्दा काग मृत्युका देउता यमराजको दूत हो । यो मानिस र ...
भाइटीकाको भाइमसलाः गुणस्तर हेर्ने मेसिन नभएपछि ‘तिहार बजार’ अनुगमन हुन सकेन access_timeकात्तिक ५, २०७६
मिठाई र त्यसमा प्रयोग हुने रङको परीक्षण गर्ने उपकरण नभएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ‘तिहार बजार’ अनुगमन गर्नसकेको छैन। मासिक वा दैनिकजसो अनुगमन गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले राजधानीका करिब ४० लाख जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको मिठाईलगायत खाद्यपदार्...
झिलिमिली तिहार : बत्तिको नो टेन्सन ! access_timeकात्तिक ४, २०७६
काठमाडौँ । ‘झिलिमिली’को चाड भनेर चिनिने तिहार नजिकिएको छ । अबको केही दिनमै तिहारले छपक्क छोप्दै छ । तिहारमा सबैतिर झिलिमिली बत्ती बाल्ने गरिन्छ । परम्परागत दीयो, दियालो र मैनबत्तीले घरआँगन सजाउने परम्परा भए पनि पछिल्लो समय बढ्दो आधुनिकतासँगै हाम्रो सं...
तिहारको सुरक्षा : जीत–हारको उद्देश्यले खेलिने खेलप्रति कठोर नीति access_timeकात्तिक १, २०७६
–नारायण ढुङ्गाना काठमाडौं– नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहारमा जीत–हारको उद्देश्य राखेर खेलिने खेल नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायले कठोर नीति अपनाएको छ । चाडबाड केन्द्रित विशेष सुरक्षा योजनालाई थप कडाइका साथ लागू गर्दै प्रहरीले तिहारमा खेलिने ज...